Ifektri yegumbi lokuhlambela Ifektri | Abenzi baseChina baseBlack Bath nakwabaxhasi
Igolide yegolide ye-chrome esebenza kabini isitya sokuhambisa
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-F16 Izinto zomzimba 304 intsimbi engenamsebenzi Umsebenzi oPhindwe kabini weZiphatho ogqityiweyo ogqityiweyo uRose igolide chrome Uhlobo lwangoku: Basin faucet Ukupakisha ibhegi yegwebu kunye nebhokisi. Ubuninzi be-aerator esemgangathweni ebonelela ngokusebenza okuthembekileyo kwimisebenzi yokuhlambela yemihla ngemihla. Ihambisa ngokufanelekileyo ...
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-F08 Izinto zoMzimba 304 intsimbi engenamsebenzi Umsebenzi Inani elinye lokuPhathwa okungagqitywanga UkuGqitywa kwesitayile Uhlobo lwangoku Igumbi lokuhlambela lokupakisha ibhegi yeFoam kunye nebhokisi eqinileyoUlwakhiwo lwensimbi olungenasici olungama-304 luqinisekisa ukusetyenziswa okuzinzileyo, ukunganyibiliki kunye ne-anti-rust. , iyilelwe kakuhle kwaye isebenza ngokubamba i-lever kwaye yimigca enobabalo kunye ne-slimline spouts, ilungile kumbhobho wokuhlamba umatshini, ikiti ...
Uyilo oluhle lomsebenzi ophindwe kabini kwigumbi lokuhlambela
Ukucaciswa kwenombolo yemodeli CP-F12 Umzimba weMathiriyeli 304 intsimbi engenamsebenzi Umsebenzi oPhindwe kabini weZiphatho ezingagqitywanga zigqibile isitayile Uhlobo lwangoku: Basin itephu yokupakisha ibhegi yekhatoni kunye nebhokisi. I-aerator esemgangathweni esemgangathweni ebonelela ngokusebenza okuthembekileyo kwimisebenzi yokuhlambela yemihla ngemihla. Ihambisa intsebenzo efanelekileyo kuyo yonke indawo yokuhlambela ...